အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည် ဆရာဝန်ထံသို အော်ဟစ်ရောက်လာပြိး .
.ဆရာဆရာ ကူပါအုံး ကျွန်မယောကျာ်း ကြွက်တစ်ကောင်မြိုချမိလို့....။.
သူဆီပြန်သွားလိုက်ပါ၊သူပါးစပ်ရှေ့မှာ ဒိန်ခဲတစ်တုံးဝေ့ယန်းပြလိုက် ကျွန်တော်လိုက်လာခဲ့မယ်.။.. ဟုဆရာဝန်ကပြောလိုက်သည်။ ငါးမိနစ်လောက်ကြာမှဆရာဝန်ရောက်လာသည်။လူတစ်ယောက်သည်စက်တီပေါ်တွင်လှဲနေသည်။
အမျိုးသမီးက ထိုလူ၏ပါးစပ်နားတွင် ငါးသလောက်ခြောက်တစ်ကောင်ကိုဝေ့ယန်းနေလေသည်။ ခင်ဗျားရူးနေလား ခင်ဗျားကိုကျုပ်ကဒိန်ခဲပြပါဆိုနေ...
ကျွန်မသိပါတယ်ဆရာရယ်ဒါပေမယ့် ကျွန်မကြောင်ကိုအရင်ထုပ်ရမှာဖြစ်လို့ပါ.. ။
ဘာလင်မြို့ပေါ်တွင်အမေရိကန်ဗုံြးဲကလယာဉ်များ ပျံဝဲနေကြသည်။ အမျိုးသမီးမှ မြန်မြန်လုပ်လေ သွားခိုရအောင် ဘာလုပ်နေတာလဲ ဟုအော်ပြောလိုက်သည်။ ငါ့သွားတုမတွေ့လို့ ကွဟု အမျိုးသားပြန်အော်လိုက်လေသည်။ သူတို့တွေဘာကျဲမယ်လို့ရှင်ထင်နေလို့လဲ. အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကြဲမယ်လို့ရှင်ထင်နေလို့လား ဟုအသံစူုးစူးဖြင့်ပြန်ဟောက်လိုက်လေသသည်။
ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းသည် ဖဲချပ်တစ်ထုပ်နှင့်တူသည်။ခင်ဗျားလိုက်ပိုးပန်းနေစဉ်မှာတော့ Heart ဖဲချပ်ပေါ့။ ခင်ဗျားစေ့စပ်တဲ့အခါမှာတော့ အဲဒါ Diamond ပဲ။ မင်္ဂလာဆောင်ပြိးသွားတဲ့အခါကျရင်တော့ Clubs တွေဖြစ်သွားရော။ အဆုံးမှာတော့ အာလုံး Spades တွေဖြစ်ကုန်တော့တာပဲ။
ဂျိုအန်း...။ ယောက်ကျားတွေ လက်ပတ်နာရီကလွဲပြီး တခြားဘာမှမဝတ်တဲ့နေရာကိုသိတယ်.. ဖါးဂေါ့....။ဘယ်နေရာလဲ ဘယ်နေရာလဲ ဂျိုအန်း....။လက်ကောက်ဝတ်မှာလေ..။.
အလုပ်သမား..။ကျွန်တော်ဇနီးကလူကြီးမင်းဆီကနေ ကျွန်တော်ကို လခတိုးတောင်းခိုင်းပါတယ်။..
အလုပ်ရှင်.......။ရပါတယ်။ကျုပ်လည်း ခင်ဗျားကိုလခတိုးပေးရမလားဆိုပြီး ကျုပ်ပ်မိန်းမကိုမေးကြည့်ထားမယ်လေ.. ။
အမျိုးသမီး.တစ်ယောက်သည် သူတောင်းစားအား...ရှင်မရှက်ဘူးလား လမ်းမှာတောင်းစားနေရတယ်လို့..ဟုပြောလိုက်၏။ သူတောင်းစား. က ဒီတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာတုန်း ရုံးခန်းဖွင့်ရမှာလားလို့ ပြန်ပြောလိုက်တော့သည်။
အလွန်နာမကျန်းဖြစ်နေသောအမျိုးသမီးသည် ခင်ဗွန်းသည်အားပြောလေသည်။ကျွန်မသေမယ်ဆိုရင် ရှင်နောက်အိမ်ထောင်ပြုပါ၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်မအဝတ်အစားတွေကိုတော့ နောက်မိန်းမကို ပေးမဝတ်ပါဘူးလို့ ကတိပေးပါဟူပြောလေသည်။ ယောကျာ်းက စိတ်ချပါ ငါပေးမဝတ်ပါဘူး၊ ပြိးတော့ အဲဒါတွေကလည်းသူနဲ့မတော်ပါဘူးကွာဟု ပြန်ပြောလိုက်လေသည်။ ။
Posted by JACBA at 7:37 AM